अब भने लाइसेन्स समयमै पाइएला त ? « Aarthik Sanjal अब भने लाइसेन्स समयमै पाइएला त ? – Aarthik Sanjal
अब भने लाइसेन्स समयमै पाइएला त ?
१६ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १५:५२
काठमाडौं । ठूलो क्षमताको छपाइ उपकरण (मास प्रिन्टर) सञ्चालनमा आएसँगै दुई लाख ४० हजार भन्दा बढी ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छापिएको छ । झण्डै आठ लाख छाप्नु पर्ने मध्ये अहिलेसम्म उक्त चालक अनुमतिपत्र छापिइ सकेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
झण्डै पाँच लाख ५० हजार अनुमतिपत्र छाप्न बाँकी छ । विभागले तीन चरणमा उपकरण सञ्चालन गरेर बाँकी अनुमतिपत्र छापिरहेको महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए । आगामी असारसम्ममा बाँकी अनुमतिपत्र छापिसक्ने विभागको लक्ष्य छ । महिनामा एक लाख ५० हजारभन्दा बढी अनुमतिपत्र छपाइ भइरहेको छ । उनले भने “यही गतिमा काम अघि बढ्दा आगामी असारसम्ममा सकिन्छ ।”
विभागले गत वर्ष ग्लोबल खरिद प्रक्रिया मार्फत मदरास प्रिन्टर प्रालि मार्फत प्रिन्टर किनेको हो । विभागले छपाइ गर्नसक्ने क्षमताभन्दा माग धेरैगुणा बढी हुँदा एक वर्ष सेवाग्राहीले अनुमतिपत्र पाएका थिएनन् । कतिपय कार्ड छापिएको लामो समयसम्म सेवाग्राही लिन नआउँदा व्यवस्थापनमा कठिन भएको यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ । अनुमतिपत्र परीक्षा लिने र वितरणको काम प्रदेश कार्यालबाटै सञ्चालन भइरहे पनि छाप्ने काम विभागले गर्दै आएको छ ।